Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Donald Trump oo Somalidu Inay Maraykanka Halis Ku Yihiin Sheegay.
Daawo: Donald Trump oo Somalidu Inay Maraykanka Halis Ku Yihiin Sheegay.
Donald Trump oo la hadlayey taageerayaashiisa ayaa sheegay in dadka Soomaalida ah iyo qaxootiga kale ee kasoo jeeda (Wadamada Argagaixisada) sida uu hadalka u dhigay ay tahay in laga joojiyo in ay yimaadaan Maraykanka.
Waxaan shacabka Maraykanka kusoo dayney dad kayimid “Wadamada Argagixisada”, taasoo ay ahayd in aan loo oggolaanin inay dalka imaadaan, maadaama aan wax baadhitaan ah lagu sameynin ayuu yidhi Maalqabeenka Musharaxa ah Trump xili uu ku sugnaa magaalada Portland ee Gobolka Maine ee dalka Maraykanka.
Trump ayaa si gaar ah farta ugu fiiqey mujtamaca Soomaalida ee Maraykanka ku dhaqan, waxaana uu ku tilmaamey kumaankun Soomaali ah oo yimid dalka Maraykanku in ay la yimaadeen dhibaatootin. Waxaan ka ognahay malahan kuwa ay yihiin Soomaalida aan soo dhaweeyney. Waxaa suurtagal ah in ay yihiin kuwa ugu weyn taariikhda ee cadowga u basaasaya ayuu yiri Trump.
Trump ayaa qaxootiga Muslimiinta ku tilmaamey Xayawaan, waxaana uu yidhi waxaan la tacaamuleynaa xayawaan. Musharaxa Jamhuuriga ayaa Gobolka Main ku tilmaamey mid Soomaalidu u soo jiidey denbiyo waaweyn. Waxaan aragney denbiyo aad u badan, xaaladda denbiyadu aad ayey u sii xumaatey mar kasta, reer Maine waa ogyihiin, in denbiyada ugu badan ay ka yimaadaan Soomaalida, ayuu yidhi Trump isagoo taageerayaashiisa weydiinaya in uu ku saxsanyahay hadalkiisa iyo inkale?
Waxaa la is weydiinayaa sababta Donald Trump uu qaxootiga Soomaalida gaar uga yeelay iyagoo kamid ah qawmiyadaha ugu yar ee u haajirey Maraykanka. Waa markii labaad ee Donald Trump si gaar ah u bartilmaameedsado qaxootiga Soomaalida isagoo horey ugu tilmaamey in ay Daacish taageeraan in badan oo kamid ahna ay kamid noqdeen ISIS.